Blu-ray Review: ụtarị na ahụ
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Blu-ray Review: ụtarị na ahụ
by admin December 19, 2013 939 echiche
Ihe otiti na ahụ bụ akụkụ na-adọrọ mmasị na nnukwu akwụkwọ akụkọ nke onye na-eme ihe nkiri mmtali bụ Mario Bava. Banyere akụkọ, ọ dị anya na ọrụ ya kacha mma. Ọ na-eme nwayọ nwayọ, yana atụmatụ nke na-agba mbọ ma dịkwa mgbagwoju anya. Otú ọ dị, n'ụzọ dị mma, mgbalị 1963 dị n'etiti ihe ndị kasị ukwuu Bava rụzuru - nke ahụ na-ekwukwa ọtụtụ ihe maka onye isi a na-eto ebe niile maka ụdị ọhụụ ya pụrụ iche na nke mmetụta.
Ederede ahụ, nke Ernesto Gastaldi (Torso), Ugo Guerra na Luciano Martino dere, ga-abụ azịza Italytali na mmegharị nke Roger Corman nke Edgar Allan Poe - ọ na-aga nke ọma. N’oge na-adịghị anya ọ laghachisịrị site na ndọta-n’agha gaa n’ezinaụlọ ya, e gburu onye isi ọchịchị obi ọjọọ Kurt Menliff (Christopher Lee). Mana mmekpa ahụ nke ezinụlọ ya agabigabeghị, dịka ajọ igbu ọchụ-ihe omimi na-apụta. Ndị na-ege ntị ga-ajụ ma mmụọ mmụọ Kurt ọ na-achụ manor ma ọ bụ na otu n'ime ndị bi na ya kpatara ogbugbu ahụ.
Ihe otiti na ahụ na-ewere ọnọdụ na narị afọ nke 19, n'ihi ya, ọ jupụtara na ikuku Gothic, n'adịghị ka mmalite mbụ nke Bava, Black Sunday. Mana agbagburu ya na agba di ebube, na-ekwusi ike na acha odo odo na odo odo. A tọhapụrụ otu afọ ahụ dị ka Oké Sabbathbọchị Izu Ike yiri nke ya, The Whip and the Body nyere aka ịtọ ntọala maka ọdịnihu Bava. Onye na-ese ihe nkiri Ubaldo Terzano (Deep Red) n'ezie keere òkè na ụdị ọhụụ, mana Bava, obi abụọ adịghị ya, nwere ọtụtụ ntinye.
E wezụga ihe a na-ahụ anya, Whip na ahụ dịkwa mma maka mkpokọta ya. Christopher Lee (The Wicker Man) na-enweta otuto isi maka oke ọrụ ya. Ndị na-eme ihe nkiri Italiantali ga-amata ọtụtụ ndị ọzọ na ndị na-eme ihe nkiri Bava, gụnyere Harriet Medin (Ọbara na Black Lace), Luciano Pigozzi (Ọbara na Black Lace), Gustavo De Nardo (Black Sabbath) na Tony Kendall (Nlaghachi nke Ọjọọ Ọjọọ).
Ihe otiti na ahụ bụ mgbakwunye ọhụrụ na nchịkọta Kino Classic's Bava, yana mwepụta Blu-ray nke na-ewetara ihe ngosi bara ọgaranya na ndụ. Ihe onyonyo a di elu kari anya nke oma karie DVD eweputara na mbu, mana, nyere ihe ndekọ Kino, achoro m ikwenye na mbufe onyogho bu ihe nlere anya nke ihe nkiri. E wezụga na ndị na-adọkpụ ụgbọala, naanị ihe pụrụ iche bụ nkọwa ọdịyo nke edekọtara na mbụ site na Video Watchdog's Tim Lucas. The track jupụtara na ozi, dị ka mgbe niile, ma ọ na-hilariously dere (ntụgharị Lucas kwuru Lee si "na-abịa" ọrụ ke Star Wars: nwunye II).
Dika otutu ihe ndi Italia nke oge a, ndi otu ndi na-eme ihe nkiri na-ekwu okwu n'asusu ha ma soro ndi ozo mee ihe nkiri. Diski ahụ gụnyere nsụgharị Italiantali (nke nwere aha ndị kwekọrọ na ya) tinyere nsụgharị Bekee (na-egosi onye na-eme ihe kacha mma Christopher Lee - ọ bụghị nwoke ahụ n'onwe ya). Ihe olu a na-agbanwe agbanwe na-ada ụda, gụnyere akara Carlo Rustichelli (Kill Baby, Kill).
Fans na-arụrịta ụka banyere ụtarị ahụ na ahụ dị n'etiti Bava's filmography magburu onwe ya, mana a pụghị ịgbagha agbagha cinematography ya. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị abụ nkwalite kachasị mma na ọrụ ya, The Whip and the Body kwesịrị ka elele maka ndị na-eduzi foto foto ọ bụla. Ọmarịcha ọkụ nke aka mmụọ Lee, nke a na-asacha na-acha anụnụ anụnụ, jiri nwayọ na-esite na ndò na igwefoto bụ otu n'ime ọtụtụ setịpụrụ ebube.